Duqeyn laga fuliyay Puntland oo lagu dilay 8-dagaalyahano oo ka tirsan Al-Shabaab | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Duqeyn laga fuliyay Puntland oo lagu dilay 8-dagaalyahano oo ka tirsan Al-Shabaab
Duqeyn laga fuliyay Puntland oo lagu dilay 8-dagaalyahano oo ka tirsan Al-Shabaab
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday duleedka Bari ee Magalada Boosaaso ee Xarunta gobolka Bari Maamulka Puntland.
Diyaaradaha nooca aan duuliyaha laheyn oo loo maleynayo in uu leeyahay Mareykanka ayaa la sheegay inay duqeyntaas ka fuliyeen deegaankaMiraalle oo 28km dhanka bari uga beegan Magaalada Boosaso,iyaga oo kaashanaya Ciidamada PSF Puntland.
Saraakiilka tirsan Puntland ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaas ay ka dambeysay kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu deegaanka Duqeynta ka dhacdaydagaal ku dhexmaray Kooxda Daacish iyo Al-Shabaab.
Saraakiishu sidoo kale waxa ay sheegeen in duqeyntaas lagu dilay 8 ka mid ahAl-Shabaab,waxaana deegaanka duqeynta ka dhacday uu yahay dhul buuraley ah.
Mareykankaayaa todobaaadyadii lasoo dhaafay waxa uu kordhiyay duqeymaha uu la beegsanayo Saldhigyada Al-Shabaab,waxaana shalay War kasoo baxay Africom lagu sheegay in deegaanka Gandarshe ee Gobolka Shabeellaha Hoose duqeyn ka dhacday ay ku dileen 62 Xubnood.